Global Voices teny Malagasy · 17 Avrily 2008
17 Avrily 2008
Tantara tamin'ny 17 Avrily 2008
Zimbaboe : Hibodo ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena
Zimbaboe17 Avrily 2008
Bev Clark no mametraka ny fanontaniana ao amin'ny blaogin'ny kubatana.net moa ve tokony hibodo ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena [amin'ny Zoma] ny Zimbaboeana : A young man has written to Kubatana asking us to forward his “plea” to people to boycott the Independence celebrations even if they want to see...
Zimbaboe : Toeram-piadanana afaka handalovan'ny Afo Olaimpika Sinoa
Fanatanjahantena17 Avrily 2008
Tomas Muarramuassa no manoro hevitra ny tombotsoan'ny mpikarakara amin'ny fampandalovana ny Afo Olaimpika any Zimbaboe : O único lugar do mundo onde a tocha olímpica poderia passar despercebida, em paz, capaz de não arrastar os indesejáveis manifestantes pro-Tibet poderia ser no Zimbabwe, onde a população não só não sabe o...
Kamerona17 Avrily 2008
Fahalalahàna miteny17 Avrily 2008
Lazain'ny The Haitian Blogger (mpamaham-bolongana Haisiana) fa “diso toerana (babangoana na hafahafa) ny mandre ny filazan'ny Amerikana ‘fahombiazana’ tamin'ny rotaka miady hanina any Haiti.”
Armenia: Kolontsaina hafa
Tselatra · Armenia17 Avrily 2008
Manoratra ny kolontsaina mety ho hafahafa amin'ny vahiny miaina any Armenia i Dominic. Tsy maintsy miatrika ny fifampitantanan'ny olona amin'ny fandihizana tampoka eny an-dalana, marihin'ingahy mpanolotenan'ny tafi-pandriampahalemana moa fa mahitsy fo kokoa ny Armeniana amin'ny fitsikerana ny hafa.
Vietnam: Androm-pahatsiarovana ny mpanjaka Hung
Tselatra · Vietnam17 Avrily 2008
Ny mpamaham-bolongna Faster than the Fastest (haingana noho ny tena haingana) no manontany: “Fantatry ny Vietnamiana rehetra fa 18 ny isan'ny mpanjaka Hung 18 tao anatin'ny 4000 taonan'ny tantara, Nahoana moa no ao anatin'ny iray andro ihany no ahatsiarovana azy ireo? Fa angaha andro mitovy no “niambohoan” izy rehetra?”
Jordana: Ahoana ny ahafahan'ny praiminisitra maneho ny fahamendrehany?
Tselatra · Jordania17 Avrily 2008
Avy any Jordana i Khalaf no manontany: “Ahoana moa no ahafahan'ny praiminisitra nitondra fiakaram-bidin-javatra mihoatra ny 10% nandritra ny fotoana nitondrany, nampihisatra ny fitomboan-karena, tsy nahombiazana teo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana ary tsy afa-nanatontosa tetikasam-panjakana lehibe mihitsy no mbola ho afa-manaporofo ny fahamendrehany?”